Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Magaalada biririfta adduunka ugu yar uguna jaban
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Nasashooyinka magaaladu waxay noqon karaan kuwo aad u jaban, laakiin dhammaantood waxay kuxiran yihiin halka loo socdo, iyadoo fasaxyada magaalada qaarkood ay aad uga qaalisan yihiin kuwa kale.
Nambarka koowaad ee magaalada ugu qiimaha jaban liistada ayaa ahayd caasimada Argentina ee Buenos Aires.
Istanbul waa magaalada labaad ee ugu jaban liiska.
Meel kale oo Koofurta Ameerika ah ayaa galeysa kaalinta saddexaad, markanna Rio de Janeiro.
Nasashada magaalada ayaa ah meesha ugu fiican ee si dhakhso leh looga baxo waana fursad lagu qaato dhaqanka ugu fiican, cuntada, cawayska, iyo dukaamaysiga oo meel uun lagu bixinayo dhawr maalmood gudahood.
Waxay sidoo kale noqon karaan kuwo aad u jaban, laakiin waxay kuxirantahay halka loo socdo, iyada oo fasaxyada magaalooyinka qaarkood ay aad uga qaalisan yihiin kuwa kale.
Marka, magaalooyinkee ayaa ugu jaban haddii aad qorsheyneyso inaad ka baxdo 2021? Si loo ogaado, khubarada safarka waxay falanqeeyeen 75 ka mid ah meelaha ugu caansan adduunka ee biririfta qiimaha waxyaabaha sida qolka hoteelka, makhaayadda, ama biir qabow oo fiican.
Magaalada ugu jaban adduunka ayaa jebisa
Nambarka ugu jaban ee magaalada lagu qoro ee liistadu waxay ahayd caasimada Argentine ee Buenos Aires, oo ahayd waddanka ugu jaban celceliska qiimaha labada dhalo oo khamri ah ($ 3.10) iyo tikidh hal dhinac ah oo lagu qaado gaadiidka maxalliga ah ($ 0.27).
Kaliya maahan inay tahay magaalo si dhab ah loo awoodi karo, laakiin magaaladan ballaaran, ee mashquulka badan waxay leedahay wax badan oo la arko oo la sameeyo, oo ay ku jiraan qasriga madaxtooyada, Casa Rosada, Teatro Colón opera house, iyo matxafka MALBA.
2. Istanbul, Turkiga
Waxay ku taal midig xadka u dhexeeya Yurub iyo Aasiya xeebta Bosphorus Strait, Istanbul waa magaalada labaad ee ugu raqiisan liiska, iyadoo qiime jaban laga helayo dhammaan guddiga, oo ay ku jiraan $ 0.40 tikidhka safarka ama qiime dhan $ 0.41 kiiloomitir halkii taksi ah .
Istanbul waxay ahayd magaalada ugu qaalisan Yurub ee aan eegnay, oo leh inta badan meelaha kale ee la awoodi karo ee ku yaal Koonfurta Ameerika ama Bariga Yurub, markaa haddii aad rabto nasasho diiran oo Yurub ah oo bixisa tan ugu fiican Bariga iyo Galbeedka, waxaa habboon in la fiiriyo !
Meel kale oo Koonfurta Ameerika u socota ayaa gashay kaalinta saddexaad, markan Rio de Janeiro ee dalka Brazil. Rio wuxuu hayaa magaca sharafta leh ee magaalada ugu raqiisan liiska loogu talagalay biirka qabyada ah, oo ah $ 1.34, oo ku habboon nasashada xeebta Copacabana ama Ipanema!
Soojiidashada ugu caansan ee magaaladani waa taalada weyn ee Masiix Bixiye, halka qaar badani doortaan inay soo booqdaan inta lagu gudajiro xafladda Carnival.
Magaalada adduunka ugu jaban ee jaban
Switzerland waxay caan ku tahay inay tahay wadan qaali ah, xitaa waxaa ka sii weyn magaalooyinka waaweyn sida Zurich, oo ahayd magaalada ugu qaalisan tagaasida iyo gaadiidka dadweynaha, markaa waxaad ubaahantahay inaad lugaha kalabixiso oo aad lugeeysid hadaad booqato!
Waxaa laga yaabaa inaysan aheyn wax lala yaabo, iyadoo Zürich uu ka mid yahay caasimadaha bangiyada iyo dhaqaalaha adduunka!
Reykjavík wuxuu kaalinta labaad ka galayaa liiska magaalooyinka ugu qaalisan in la booqdo, halkaasoo aad ku bixin doonto wax ka yar $ 200 habeenkii joogitaanka hoteelka, iyadoo biir qabyo ah uu ku kacayo wax ka badan $ 10 celcelis ahaan!
Caasimada Iceland wali waa u qalantaa booqasho, in la iska hubiyo taariikhda Viking-ka magaalada iyo qaabdhismeedka cajiibka ah ama saldhig ahaan si loo sahamiyo inta ka hartay waddankan gaarka ah ee quruxda badan.
Magaalo kale oo Switzerland ah ayaa gashay kaalinta saddexaad, iyada oo leh Geneva sidoo kale haysashada qiimaha ugu sarreeya ee makhaayadda, oo ah $ 30.56 qofkiiba (ogow taasi waa makhaayad waddada dhexdeeda ah, sidoo kale maahan xarun shan xiddig leh).
Hadaad awoodi kartid inaad qiimeyso qiimayaasha inkasta oo, waxaa lagugu abaalmarin doonaa magaalo qurxoon oo ku taal buuraha Alps iyo Juras, oo leh aragtiyo waaweyn oo ku saabsan Mont Blanc iyo Lake Geneva.